TV Mira Fekitori - China TV Mira Vagadziri, Vatengesi
YF-H-906 Smart Round Kofi Tafura + TV inomira ine Rotatable Dhirowa muWhite & oak
Ipa nzvimbo yako kukudziridzwa kwechimiro chazvino uye runako neiyi seti yetafura yekofi 2.
Dhizaini ine mukurumbira ine kubata kwekukwezva kwazvino, iyi yakasarudzika inokwanisika stand yeTV uye tafura yekofi ichave sarudzo yakanaka kune yako imba yekutandarira
YF-H-903 multifunction cofee tafura + dinging tafura
Dhizaini ine mukurumbira ine kubata kwekukwezva kwazvino, ichi chakasarudzika chinowedzerwa TV chimire ichave sarudzo yakanaka kune yako imba yekutandarira. Iine iyo inoshanda inokwanisika dhizaini, iwe unogona kugadzirisa kureba kwayo zvinoenderana nezvaunoda uye icho chakawedzerwa chidimbu chinopa imwe nzvimbo yekuwedzera yekuratidza mabhuku ako, mifananidzo yemhuri, zvishongedzo, nezvimwe.
YF-H-901 TV Mira 3-Dhirowa Midhi Mira neGoridhe Furu & Yakapfava girazi Pamusoro
Kana iwe uchitsvaga chidimbu chidimbu kuti unyatso jazz kumusoro nzvimbo yako yekugara zvino ndozvazviri! Yakanaka kwazvo uye yazvino, ichokwadi kutora nhanho yepakati mumba mako yekutandarira. Iyo chena nyowani yakanaka pakugadzira runyararo mhepo. Iwo mavara ese anoratidza zvakanakisa kubva pamayuniti 'akanakisa kupedzisa zvakare.
YF-H-907 yeganda yekutandarira seti
Geometrical line pateni inosangana netafura inotsvedzerera, ichiita kuti ive yakanaka kune yemazuva ano imba.
YF-H-905 TV inomira neMadhirowa & maDhivha muGoridhe
Kunyangwe iwe uchangobva kutamira mumusha mutsva kana iwe wafunga kugadzirisa patsva uye unoda chitsva cheTV kumira kuti uende nekamuri rako, pane zvakawanda zvingasarudzwa.
YF-H-904 White Rectangular Kuchengeta Kofi Tafura + TV inomira
Yemazuva Ano Luxury: Sleek dhizaini ine inopenya yegoridhe kupedzisa inowedzera kupenya kubata kune chero nzvimbo, yakanakira kuishandisa kuitisa kutenderera fashoni yazvino kutaridzika.Tafura yekofi ichawedzera kutaridzika uye kwazvino kutaridzika kune chero kamuri iri mumba ine yakapfava, kupenya chena kubwinya kupedzisa.
YF-H-900 yakasarudzika yegoridhe TV seti
Mira Yemazuva Ano Goridhe Mirrored Media Console ine 6-Dhirowa & Girazi yepamusoro Yakagadzirwa neMDF, girazi rakadzikama uye simbi isina simbi kuitira kuti ishandiswe kwenguva refu.
YF-H-700 pedza inopenya uye yakachena-yakarongedzwa dhizaini terevhizheni
Yemazuva ano TV wall unit ine yakakwira gloss chena MDF mitsara
Exquisite TV Stand ichipa yakakwenenzverwa ekuchengetedza michina iyo inokwana chidzitiro chako uye inokwana zvakakwana mune chero nzvimbo.